Kwenzeka ntoni kwindawo yakho ngoku? | Martech Zone
Kwenzeka ntoni kwindawo yakho ngoku?
NgoMvulo, Agasti 15, 2011 Lwesine, Okthobha 27, 2011 Douglas Karr
Uninzi lwabathengi bethu luphononongwa kubahlalutyi yonke imihla okanye ngeveki. Ngamanye amaxesha, bayothuka ziziphumo. Mhlawumbi yayikhankanywa kwenye ibhlog, upapasho okanye indawo yokubhukmakha kwezentlalo. Ingxaki kukuba abayiboni ngoku… Bayibona kwiiyure ezisibhozo ukuya kwezingama-8 emva komsitho.
Uninzi lwezentengiso lumalunga nexesha kunye namandla. Ngomso kuhlala kusemva kwexesha ukuzama ukolula ispike kwezithuthi. Ngexesha olibona kwiphakheji yakho ye-Analytics, liphelile. Ixesha elilungile kubahlalutyi ngundoqo kwesi sicwangciso. Ukutyala imali ngexesha lokwenyani kubahlalutyi imveliso efana Phinda uvuselele (Ndingumsebenzisi osungulayo we-Reinvigorate-kutshanje kuthengwe ngumthengi wethu Indawo yeWebhu) inokukunika ulwazi oludingayo.
Iindleko zesicelo esinjengalezi zichaziwe .. ukuqala kwi- $ 10 ngenyanga. Lixabiso elincinci elinikezwe ezinye zeempawu. Ukwazi ukubona ukuba bangaphi abantu abatyelele indawo yakho ngeyure, imephu zomsebenzi wabo, ukulandelela imisebenzi yabo kule ndawo, kwaye babone nomsebenzi wabatyeleli kule ndawo.
Ukuchonga umsebenzi kwindawo yakho ngexesha lokwenyani kunokukunika ulwazi ekufuneka ulwenzile Ngokukhawuleza utshintsho, yandisa i-spikes kwidatha ngokwenza kwangoko ezinye izinyuselo, uguqula umxholo ongasebenzi ngaphakathi kweeyure zokuwupapasha… uluhlu luqhubeka njalo.
Uphando luthi: Ixesha elichithwe kwimidiya yoluntu liXesha eliSebenzisiweyo
Agasti 19, 2011 kwi-4: 16 AM
Enkosi ngokukhankanya uDoug. Sonke siyathandabuza ngayo. Umakishwe kwibhlog yethu ngayo mva nje kwaye ipholile kakhulu. Andinakulinda ukuyibona ngephulo elitsha lokusungulwa kwixesha elizayo! Ubenosuku olumnandi kakhulu.
Agasti 19, 2011 kwi-4: 26 AM
Liqonga elikhulu kwaye lizalisa isithuba esincinci esihle kwisuite yeemveliso zeWebtrends ngoku. Niyamangalisa!